Post by Admin, Jan 5, 2019.
Oo lagu baadhay Macaamiisha Shirkadda Isgaadhsiinta ee #Telesom.
Hargeysa – [Telesom] - Cilmi-baadhe Maxamed Yuusuf (Prof. Iqra) ayaa habeenimadii Jimcaha ku soo bandhigay Cali Jirde Hotel ee magaaladda Hargeysa Cilmi-baadhis (Research) ay samaysay Jaamacadda Alcayn oo ku taala Imaaraadka Carabta, cilmi-baadhistan ayaa sheegtay in shirkadda Telesom ay ka gaadhay heerka raali-galinta macmiisha 86% oo ah heer aad u sareeya.
Bandhiga cilmi-baadhistan oo ay ka soo qayb-galeen masuuliyiinta shirkadda Telesom iyo marti-sharaf kale oo badan ayaa lagaga hadlay heerka ay shirkadda Telesom ka taagan tahay raali-galinta macmiisha. Kulankan waxaa ka hadlay masuuliyiin kala duwan, waxaana munaasibadan soo qaban-qaabisay xarunta Waayeel Consulting.
Kulankan waxaa ka hadlay Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland Dr Cabdiwali Sheekh C/Laahi Suufi, Wasiirka Horumarinta Ganacsiga iyo Maal-gashiga Caalamiga Maxamed Axmed Maxamuud (Cawad), Aamina Faarax Caarse iyo Sucaad Carmiye, waxaanay shirkadda Telesom ku bogaadiyeen kaalinta ay kaga jirto horumarka dalka iyo siday hormuudka ugu tahay raal-ahaanshaha Macaamiisha.
Dhanka kale, Cabdirashiid Muuse Iimaan oo ka tirsan Boodhka sare ee shirkadda Telesom ayaa macaamiisha Shirkadda uga mahadnaqay sida ay ugu markhaati fureen sida ay shirkaddu ugu adeegto. Md. Cadirashiid ayaa sheegay natiijaddan ka soo baxday cilmi-baadhistani inay ku biiri doonto dedaalkii ay shirkaddu ku raadinaysay istiraaf caalamiya.